Ejipta: Tsy ‘tongasoa’ ve i Obama? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Jona 2009 12:53 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Français, Italiano, polski, bahasa Indonesia, English
Valo amby efapolo ora mialoha ny kabary andrasan'ny tontolo arabo sy silamo fatratra hataon'ny filoha amerikana Barack Obama avy ao amin'ny Anjerimanontolon'i Cairo, dia saiky miray feo daholo ny tontolon'ny fitorahana blaogy Ejiptiana. Tsy faly amin'ny endrika mibaribary sy tafahoatra atao ho fikarakaràna sy fiarovana raisin'ny governemanta ejiptiana ho an'ity fitsidihana ity ny mpitoraka blaogy, ary maro amin'izy ireo no misalasala hoe hitondra fiovana mivaingana kely marina ve ity kabary niomànana ity. Ilay mpaka sary Waleed Nassar, izay miasa ao akaikin'ny Anjerimanontolon'i Cairo, dia nanoratra momba ireo fanomànana natao teo amin'ny faritra manodidina azy:
Miasa eo akaikin'ny Anjerimanontolon'i Cairo aho ary tao anatin'ny alina iray monja dia niova tanteraka ity faritra ity. Ny làlana nikitaontaona mankany amin'ny Anjerimanontolo izao dia lasa malama toy ny sily. Na ireo trano avo manodidina ny faritra aza dia notifirina soson-doko tokana daholo, saingy tsy ny trano avo rehetra an, izay mitodika any amin'ny làlana ihany. […] Tsara ery izany rehetra izany nefa mba hainao ve ny fandraisan'ny mponin'i Cairo an'ireny? Tsy hisy ho afaka hifamoivoy ny Alakamisy. Reko fa hikatona ny sekoly ary tsy hiasa ny fandraharahana sasany. Satria hitetitety ny làlana mamakivaky an'i Cairo amin'ny fiara i Obama, dia hakaton'ny pôlisy sy ny mpiaro ny filoha ny làlana sy ny toerana rehetra eritreretina fa mety ho lalovany. […]
Hossam El Hamalawy nandefa tweet momba ny fikarakaràna ny resaka fandriampahalemana napetraka. Ny gazety mpiseho isan'andro Al-Shrouk nanipy toro-hevitra ny tokony hijanonana any
an-trano, ny làlana manodidina rahateo efa hakatona ihany.
Zeinobia dia nanoratra manodidina ny fandaharam-potoan'i Obama any Ejipta. Nampiany ihany koa tato aoriana fa ny filoha Ejiptiana Hosni Mubarak dia tsy hanatrika ilay kabary:
- Mubarak tsy hihaona amin'i Obama ao amin'ny Koubbah Palace fotsiny, tsy hanatrika ny kabary ao amin'ny Anjerimanontolon'i Cairo izy araka ny nambaran'ny Al-Muslamany tao anaty fandaharan'ny fahitalavitra DreamTV2 !!!! – Heveriko fa ny tsy fahatongavany hanatrika ilay kabary dia hanangana fanontaniana maro momba ny toe-pahasalamany taorian'ny nahafatesan'ny zafikeliny [lahy]
Egyptian Leftist nanoratra taratasy iray ho an'i Obama (teny mahery) arahana sary manambara izay tian-kolazaina manao hoe: “Tsy mino anao izahay!”
Mahmoud nanoratra taratasy mivantambantana be iray ho an'i Obama ao amin'ny blaoginy “Pains and Hopes” [Ar], manainga azy hizaha ny “tena” Ejipta. Nazavainy fa ny ho hitany dia tsy ny fikarakarana ny fitsidihany ihany, fa raha hanandrana hitsidika Anjerimanontolo iray hafa izy dia hahita zavatra hafa dia hafa mihitsy; hatramin'ny làlana izay tsy tsara, milamina sy madio toy izay hotsidihany. Mpitoraka blaogy iray hafa, Sherif Abdelaziz nanoratra ao amin'ny blaoginy “Justice for all” taratasy iray hafa ho an'i Obama, ary toa an'i Egyptian leftist ihany, maneho ny fisalasalany koa izy raha mety hitondra vokatsoa ny fitsidihan'i Obama:
Fantatrao ve ny Anjerimanontolon'i Cairo hotsidihanao? Eny ary!…Anjerimanontoloko io … Tao aho no nahazo ny diplaomako taona maro lasa izay .. Reko koa fa dolara an-tapitrisany maro no nolaniana hanarenana ny toerana ho an'ny ora roa monja hijeren'ny masonao azy… Tsy haiko aloha raha hitondra soa kely ho anay ity fitsidihana ity r'ingahy, tsy manohitra velively azy io aho, fa reraka sy mararirarin'ny zavatra rehetra kosa… tsy mino na iza na iza intsony aho, tsy mampihetsi-bolomaso ahy akory ny hihaino izay hambaranao, nefa hanandrana ihany aho..
Amin'ny lafiny iray hafa, Dalia Ziada, mafana fo iray mpiaro ny zon'olombelona izay nametraka ny fanantenany ihany amin'ny fitsidihan'i Obama, dia namarana ny hafany “Young Egyptian Activists and the Obama effect!” amin'ny filazana hoe:
Voalohany izao ny Ejyptiana , tanatin'ny ampolotaonany, no mba afaka hahita maso filoha Amerikana iray maniry hametraka fifandraisana amin'ny fitondrana Ejiptiana, na teo aza ny hamaintin'ny zava-bitany tamin'ny fanaovan-javatra mifanohitra amin'ny demokrasia sy ny zon'olombelona. Manery ny fitondrana Ejiptiana izany mba haneho fandeferana sy fahalefahana manoloana ireo olona sy vondrona mafana fo mpiaro ny zon'olombelona. Na izany aza, tsy azo ihodivirana ny fanontaniana, eo ampiandrasana fatratra ny fitsidihana hataon'i Obama ao Cairo afaka andro vitsy, mety hanao hoe: Hiseho hahavaly ny zavatra mampangetaheta fatratra ny tanora mafana fo Ejiptiana ve i Obama ka hanohana azy ireo amin'ny adin'izy ireo ho fametrahana fanavaozana anatiny sy hanatanteraka ny nofinofin'izy ireo hahita fiovana, izay nofinofiny rahateo, marina?
Anatina fanamarihana iray hafa, ny hetsika Ejiptiana Kifaya dia miantso fitokonana [sit-in] iray andro alohan'ny fitsidihana, ho fanoherana ny fanohanan'ny governemanta Amerikana an'i Israely sy ny fitondrana Ejiptiana:
الإعتصام فى ميدان التحرير من الساعة 8 مساء الاربعاء 3يونيو – ليلة زيارة اوباما وحتى صباح اليوم التالى رفضا للزيارة
Antso iray hanao fitokonana [sit-in] ao an-kianjan'i Tahrir manomboka amin'ny 8:00 alina any Cairo ny 3 Jona – mialoha ny fitsidikan'i Obama – izay hitohy ny ampitso maraina manaraka an'io – ho fanoherana ilay fiitsidihana.
Ho setrin'ny antso hanao fitokonana, Ahmed el Gizawy tahaka an'i Dalia, izay mino koa fa i Obama dia ho avy eto Ejipta miaraka aminà fikasana tsara momba ny tontolo Silamo sy Arabo, dia nangataka ny vahoaka mba hihaino ny kabariny aloha vao hanapa-kevitra hanao fitokonana [sit-in] na tsia. Toy ny topi-maso maika momba ity raharaha ity, Robb Montgomery mpanao gazety Amerikana iray, dia nanadihady Ejiptiana vitsivitsy momba ny fihevitr'izy ireo mialoha mikasika ny fitsidihan'i Obama amin'ny Alakamisy ho avy io.
Azonao atao koa ny manaraka fifanakalozan-kevitra misokatra ao amin'ny Twitter ifanaovan'ny samy mpitoraka blaogy, manodidina ny kabary sy ny fanomanana rehetra momba ilay fitsidihana, amin'ny fampiasana ny teny fototra #CairoSpeech .